Ny solomaso an'ny zava-misy virtoaly Google dia misy any Eropa | Vaovao momba ny gadget
Efa misy any Eoropa izao ny solomaso zava-misy virtoaly Google
Tamin'ny 4 Oktobra, natolotr'i Google ny fanavaozana ny solomaso kardinaly momba ny zava-misy marina, mifanaraka amin'ny fitaovana samihafa ary nahafahanay nilentika tamin'ny zava-misy virtoaly. Ny Daydream View dia solomaso vaovao an'ny Google vita amin'ny plastika ary rakotra lamba, izay tadiavin'ilay mpikaroka hikaroka ny zava-misy virtoaly amin'ny vidiny mirary. Saingy kely na tsy misy inona no ho azonao solomaso izay tsy mifanaraka amin'ny Pixel sy Pixel XL vaovao ihany tsy toy ny maodelin'ny baoritra teo aloha. Ireo solomaso ireo dia efa misy any Angletera sy Alemana.
Google dia te-handray an'izao tontolo izao amin'ny Pixel sy Pixel XL vaovao fa amin'ny rafitra fizarana izay nangoniny dia kely na tsy misy zavatra ho tratrarina. Ny fanokafana fivarotana roa, ny iray any New York ary ny iray any London dia tsy hampivarotra ny terminal toy ny hotcakes. Raha te hivarotra terminal ianao toa an'i Apple na Samsung dia tsy maintsy manitatra ny isan'ny teboka amidy ianao.
Ny fahatongavan'ireo Daydreams tao amin'ny Google Store any UK sy Alemana Mety hidika izany fa tsy haharitra ela ireo Pixel vaovao hahatratra ireo firenena ireo, satria tsy misy ilana azy ny manomboka mivarotra solomaso virtoaly virtoaly ho an'ny terminal izay tsy misy any amin'ireo firenena azon'izy ireo vidiana.
Ny daydreams dia azo amidy any UK amin'ny vidiny 69 pounds, raha any Alemana kosa no hahitantsika azy ireo amin'ny 69 euro. Ny tombana amin'ny fotoana fandefasana dia 2 ka hatramin'ny 3 herinandro. Angamba mandritra ny fotoana fialantsasatra ry zalahy avy any Mountain View ataovy ho an'ny mpampiasa any amin'ireo firenena ireo ny Pixel vaovaonahazo fanamarihana tsara toy izany hatramin'ny nanesorana ny embargo famerenana napetrak'i Google rehefa nampindrana ireo fantsona ireo bilaogy teknolojia lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Efa misy any Eoropa izao ny solomaso zava-misy virtoaly Google
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Nintendo Switch, 30% mahery kely noho ny Xbox One
Android 7.1 dia ho tonga amin'ny volana Desambra miaraka amin'ny vaovao manandanja